Kutheni le nto kufuneka usebenzise uphawu lweVidiyo ka-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Kutheni ndifanele ndisebenzise ividiyo ye-Instagram?
Disemba 15, 2018 0 IiCententarios 862
Ungawenza njani ngakumbi amanqaku akwividiyo kwi-Instagram
Umxholo we Ividiyo ye-Instagram Ixhaphake kakhulu kwiintanethi zenethiwekhi, kwaye ngenxa yoko iluncedo oluphambili kuye nabani na ofuna ukuthengisa ukwenza lo msebenzi.
Olu tshintsho lubonisa ukuba amashishini amaninzi, nokuba amancinci okanye amakhulu, aqala ukunxibelelana ngamehlo abalandeli, abathengi kunye nabalandeli. Kungenxa yoko le nto iqela lethu lokuThengisa iMithombo yezeNtlalontle lenze umzamo wokuphonononga izibonelelo zeevidiyo ze-Instagram.
Fukugcotshwa kwevidiyo Lelinye lamaqonga aziwa kakhulu Oku kuya kukuvumela ukuba usebenzise amandla okuthengisa.
Ngaphezulu kwe-150 yezigidi zabasebenzisi, i-Instagram lelona qonga lilungileyo lokwabelana. Ivumela isabelo hayi imifanekiso yodwa kodwa iividiyo ezimfutshane. Kukho izigidi kunye nezigidi zevidiyo ezabiwe yonke imihla, esisizathu esihle sokuba umntu asebenzise eli qonga. Apha ngezantsi kukho ezinye zeenzuzo eziphambili zokusebenzisa lo msebenzi.
Ungasebenzisa kwakhona i Amabali e-Instagram.
Ngokungafaniyo nezithuba zevidiyo ngaphakathi Twitter okanye iFacebook ngamanye amaxesha abasebenzisi abayigqithayo, nokuba yeyiphi na umgangatho wabo, iividiyo ze-Instagram azinqabile.
Ngokophando olwenziwe nguForrester, iividiyo ze-Instagram zivelisa amaxesha we-58 wokunxibelelana ngaphezulu kwamaxesha e-Facebook kunye ne-120 ngaphezulu kwe-Twitter. Ukuba neakhawunti ye-Instagram enomxholo onomdla kunye noluncedo unokufumana umntu onamanqanaba amangalisayo wokuzibandakanya nabaphulaphuli. Ingaba kulungile Sebenzisa ii-hashtag ze-Instagram.
Kuba umxholo uya uthandwa ngakumbi, yenye ye Izibonelelo eziphambili zokusebenzisa ividiyo Kuyanceda ukwakha ukuthembana. Abantu bathenga kubantu abanokubathemba, kwaye inqaku levidiyo le-Instagram liya kukunceda ukuba udale unxibelelwano lweemvakalelo kunye nabaphulaphuli bakho.
Into ebalulekileyo apha kukuba le fukugcoba kuvumela umntu ukuba abelane Amava akho emihla ngemihla ngendlela engaqhelekanga kunye nengacwangciswanga, enika abalandeli, abalandeli kunye nabathengi ukuziva ngenxa yeshishini labo.
Kuqatshelwe ukuba imisebenzi ekwabelwana ngayo emva kweziqendu ibekwe kakuhle kwi-Instagram, ngakumbi ukuba ingumboneleli ngenkonzo. Ezi vidiyo zenza ukuba inkampani ithembeke ngakumbi kwaye inomdla, ethi yona ichaphazele intengiso. Unako yenza imali nge-Instagram.
Yintoni omele uyazi malunga nenqaku levidiyo le-Instagram
Nangona kunjalo Ayinakongeza amakhonkco kwiividiyo Unokuchatshazelwa, basengumthombo obalaseleyo wetrata. Ukongeza, kuba amanqanaba okusebenzisana aphezulu kakhulu kunaleyo ye-Twitter kunye Facebook, ukusetyenziswa komsebenzi wevidiyo kunokuba luncedo olukhulu ekubonakaleni kwendawo yakho.
Olu khuphiswano ku-Instagram lusemncinci kakhulu kunokuba lukhona Twitter o Facebook. Uvavanyo lweAmerican Express luxele ukuba phantse i2% ye amashishini amancinci okwangoku benza umsebenzi we Ividiyo ye-Instagram kwaye bazuze isibonelelo ngaphezulu kwabo bakhuphisana nabo. Ke ngoko, kucacile ukuba xa usebenzisa ividiyo ividiyo, kunokwenzeka ukuba umntu afikelele kubaphulaphuli ekujolise kuye ngokukhawuleza kwaye kube lula.
Ewe kulungile. Into entle malunga nokusebenzisa i Umsebenzi wevidiyo ye-Instagram yiyo intengiso yasimahla. Umntu unokubonisa iinkonzo zabo kunye neemveliso ekusebenzeni ngokuvelisa umboniso omkhulu. Inqaku linika umntu ithuba lokubonisa ukuba banikezela ngantoni.
Wamkele inqaku levidiyo kwaye uya kuvuzwa!
1 Ungawenza njani ngakumbi amanqaku akwividiyo kwi-Instagram
2 Kutheni ndifanele ndisebenzise ividiyo ye-Instagram?
3 Yintoni omele uyazi malunga nenqaku levidiyo le-Instagram
Iingcebiso ze10 zokusebenzisa i-Instagram kwintengiso yeshishini